ग्रामिण भेगमा लकडाउनको प्रभाव परेन « Online Rapti
ग्रामिण भेगमा लकडाउनको प्रभाव परेन
हंशपुर : दाङमा आइतवार राती देखि भदौँ २१ गते राती सम्म निषेद्याज्ञा जारी गरिएको छ । तर बजारमा निषेद्याज्ञा कडाईका साथ लागु गरि पनि ग्रामिण भेकमा त्यसको कुनै असर परेको छैन् । जिल्लाका तुलसीपुर, घोराही, लमही ठुला बजार पूर्ण रुपमा बन्द भएता पनि ग्रामिण क्षेत्रका साना साना बजारहरु खुल्ला रहेका छन् । बबई गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ मा रहेका सम्पूर्ण पसल ब्यवसायहरु खुल्ला रहेका छन् ।
जसका कारण मानिसहरु आवत जावत गर्ने भएकाले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको स्थानियहरुले बताएका छन् । जिल्लामा भदौं २१ गते सम्म लकडाउन भएको छ, तर यहाँका पसल ब्यवसाय संचालनमा छन्, स्थानिय यज्ञ वलीले बताए । यहाँ लकडाउनको कुनै असर परेको छैन् ।
की गाउँका मानिसहरुलाई कोरोना लाग्दैन् र ? उनले भने । त्यसैगरी अर्का स्थानिय तुल्सीराम घर्तीले लकडाउन भनेपछि सबै जिल्लामा लागु हुनु पर्ने बताए । उनले यहाँको बारेमा स्थानियतह र प्रहरी प्रशासनले ध्यान दिनु पर्ने बताए । त्यसैगरी अर्का स्थानिय पूर्ण वलीले गाउँमा लकडाउन भएको जस्ता अनुभव नभएको बताए ।